Cudur daaris saaxiibaday iyo asxaabteyda ku nool Chicago | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 2, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Lagu casuumay kaqeybgalka Suuq geynta Prof Shirka Suuq B2B waxay ahayd riyo rumowday! Bandhigaygu sifiican ayuu udhacay waxaanan ku xareeyay qolkayga Renaissance. Xitaa waan haystay qaar Kaararka Ganacsiga si gaar ah loogu sameeyay munaasabadda! Waan sugi kari waayey inaan la kulmo shabakadda dalwaddii aan ku soo kordhay sanadkii la soo dhaafay.
Waxay ahayd inaan shaqeeyo Isniinta qorshahayguna wuxuu ahaa inaan kaxeeyo fiidnimada Isniinta oo aan nasto kulanka maanta, Keenista Blogging B2B Heerka Cusub.
Taasi waxay ahayd qorshihii.
Subaxnimadii Isniinta waxaan is arkay aniga oo si aan caadi ahayn ugu daalay gaadhiga shaqada. Waxaa jiray dhowr daqiiqadood oo aan u maleynayo inaan dhab ahaantii ku seexday nalalka casaanka… ma fiicna. Maalintii waxay ahayd mid wax soo saar leh, laakiin waxaan lahaa carqaladeyn maalintii oo dhan leh xoogaa xanuun yar. Gaarigayga markaan ku socdo guriga, waxaan ahaa cagaar iyo cirro. Waxaan ku soo guryo noqday oo maxaa habeen ah! Weli waxaan rajaynayay malaha waxay ahayd uun wax aan cunay oo aan go'aansaday inaan iska daayo hudheelka oo aan gaadhiga kaxeeyo saqbadhkii ka dib. Markay tahay 3AM, in kastoo, waxay ahayd inaan ku qoro asxaabteyda munaasabadda oo aan u sheego inay jirto inaysan jirin waddo aan ku sii socdo.
Waan ka sii xumaan kari waayey! Kani waa marki iigu horaysay 'show majiro' waana layla baxay. Waan ka xumahay kooxda - inta badan suuqgeynta Prof. Shelley ayaa dib iigu soo qortay iyada oo ay la socoto warqada ugu naxariista badan. Josh Hallett, Ann Handley, Deborah Franke, Phil Gomes, Christina Kerley, Iibinta Alison. Waana ka xumahay in aanan helin waqti aan is dhaafsado fikradaha asxaabta, Paul Dunay iyo Kristian Andersen iyo sidoo.
Ka dib qiyaastii 14 saacadood oo hurdo ah, dib ayaan u soo kabanayaa. Waxaan u maleynayaa inaan halkaan ku fuuli doono mootada daqiiqado yar oo aan saacad raaco. Waxaan ubaahanahay inaan udiyaar garoobo berrito - shir kale oo goboleed, WebCamp. Ma seegi doono 2 isku xigta!
Oktoobar 2, 2007 at 3:24 PM
Waan ka xumahay markaan maqlo inaadan fiicnayn! Wadnahaygu wuu burburay markii aan ag istaagay oo aan arkay wejiga yar ee cagaaran, waxaan ka walwalayay inaadan berri Web Camp joogi doonin. Waan necbahay inaad ka baaqatay shirkan aad rajaynaysay… .laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaad dareemaysid fiicnaan iyo inaad berri iman doonto WC. Fadhigaaga had iyo jeer waa mid si heer sare ah loo bogaadiyay. Berri is arag!
Oktoobar 3, 2007 at 2:18 PM
Waan ka xumahay inaadan sameyn karin! Waxay ahayd meel ka mid ah guddi. Sheekooyin badan oo wanaagsan, waano, iyo maad. Tani waa markii labaad oo aan ka mid noqdo guddi ka kooban Josh-dhexdhexaad ah wuuna fiicnaa.
Oktoobar 3, 2007 at 2:58 PM
Waan kuu xiisay, Doug. Fiicnaan lahaydaa inaan kula kulmo oo aan maqlo waxa aad qaadanayso.
Waxaan rajeynayaa inaan kuqabsado shir kale waqti uun goor dhow, waana ku faraxsanahay inaan ogaado inaad kujirto isbedelka!